Hagaha cusub ee barafuunka hagaha 2014 | Ragga Stylish
Sannadkan waxaa jiray noocyo badan oo bixiya si ay u abuuraan cadar ragga ah qayb ka mid ah alaabada xiddigooda. Waxaan soo diyaarinay sii deyntii aan ugu jeclaan laheyn sanadkaan 2014 si majaajilladooda ay u garaacdo mid ka mid ah carafta udgoon ee sanadkan.
oo dhan ayaa bilaabay TOUS MAN INTENSE, oo ah hadiyad go aan go'an oo lab ah. Udgoon udgoon udgoon loogu talagalay ragga sharafta leh.
Bossed Dhabarka: BOSS Parfums waxay u dabaaldegaan taariikhaas ciida iyagoo hadiyad gaar ah u ururiyey oo loogu talagay ninka casriga ah - BOSS BOTTLED Collector's Edition. Daabacaaddan xaddidan waxay soo bandhigeysaa udgoonkii asalka ahaa ee udgoonkii BOSS BOTTLED ee dhalo gaar ah oo cusub, oo loogu talagalay inay ka codsato ninka casriga ah iyo kalsoonida leh.
Bershka: magaalo, dhalinyaro iyo shaqsiyad, astaamaha cadarka ragga cusub ee summadu waxay raacaan isla talaabooyinka qeexaya wiilka Bershka. Caraf udgoon badan iyo tilmaammo moos ah ayaa "X isaga u ah" astaan ​​u gaar ah wiilasha leh ruux madax banaan, oo raaca xeerarkooda kuna dhiirada inay noloshooda ku noolaadaan sida ay iyagu qabaan. "X" waa calaamad tilmaamaysa shuqullo aan magac loo bixin oo qarsoodi ah si markaa qof walba u qeexo shakhsiyaddiisa u gaarka ah adduunyada oo run ahaanta ay fure u tahay guusha.
Maqnaanshaha- Ubucda dabeecad awood leh oo dahsoon, iyada oo la adeegsanayo saameynta dayaxa, dareemayaashu waa feejigan yihiin shucuurtuna way sii kordheysaa, Nuit D'Issey wuxuu qabtaa xooggan wuxuuna siiyaa ninka xambaarsan awood soo jiidasho dabiici ah. Udgoon ay ku qoran tahay maqaar, xaabo iyo daray.
Udgoon iftiin leh, oo u dhexeeya xiisadda iyo soo jiidashada.
Givenchy: Givenchy waxay uuraysatay daabacaaddan gaarka ah ee kooban ee Mudanayaal Kaliya,
sida munaasabadda si aad kuwa kale ugu soo bandhigto nooca ugu fiican ee naftaada: dhadhan aan qarsoonayn oo loogu talagalay waxyaabaha quruxda badan iyo dhaqanka wanaagsan, gadhka si fiican loo hagaajiyay qaab kastoo aad tahay, iyo xorriyadda ay u siiso inay ku xaqiijiso shakhsiyad gaar ah iyo xarrago, shaki la’aan waa furayaasha inuu noqdo nin jilicsan (taas oo had iyo jeer ah xulasho).
Mary Kay: MK High Intensity Sport wuxuu bixiyaa udgoon cusub oo xamaasad leh dhaqdhaqaaq walbana wuxuu ku marayaa halabuur jilicsan oo la xushay. Qoraalkiisa ugu muhiimsan waa berry iyo bergamot, oo lagu gooyay taabashada oksijiinta dareeraha ah; Sida dayrta bilaashka ah, qoraalada dhexe ee kaararka cusub, caleemaha reexaanta ah iyo basbaaska midabku soo galaan, aragtideeda ayaa la dareemi karaa ilaa saacad kadib codsashada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Goobo » Tilmaamaha sheekooyinka cusub ee cadarka 2014